गल्कोटका ग्रामिण मोटरबाटो मर्मत कार्य अन्तीम चरणमा, वडा नं ६ मा मर्मत सूरु ! – ebaglung.com
२०७४ आश्विन ११, बुधबार १८:२५	Top News, थप समाचार
घनश्याम गौतम, गल्कोट २०७४ असोज ११ । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गलकोट नगरभित्रका प्रत्यक वडाका ग्रामिण सडकहरुको मर्मत कार्यले तीबता पाएको छ । बर्षातको समयमा बिग्रिएका सडक चाडपर्वलाई लक्षित गरेर मर्मत गर्न थालिएको गलकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए ।नगरपालिका भित्रका साना–ठुला सडकहरुमा पानीका कारण बनेका खाडल पुर्ने तथा पहिरो पन्छाउने काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।
गलकोट नगरपालिकाका ११ वटा वडाहरु मध्ये १० वडामा मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको अबस्थामा गलकोट नगरपालिका वडा नं ६ मा भने आज बाट मोटरबाटो मर्मत थालिएको हो । गलकोट नगरपालिका ६ र ३ जोड्ने गौदी खोलामा आज ४ ओटा ह्यूम पाईप राखिएको मर्मत समितीका सदस्य गगन कुबरले जानकारी दिए । आज स्काभेटरको प्रयोग गरेर गलकोट नगरपालीका ६ मा जाने मोटरबाटोको मुख्य नाका मर्मत गरिएको छ । गलकोट नगरपालिका ६ मा जोडिएको बाटो अन्तरगत गौदी खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य शुभारम्भ भएको गत मसिर देखी सो बाटो बन्द भएको थियो । तत्कालको लागी दरम खोलमा बसाहघाट स्थित राजाको पुुलमा पनि पक्की पुल नहुुदा खोला ठुला हुदा बाटो. अबरुद्ध भएको छ ।
अहिले गलकोट नगरपालिका ६ बाट गलकोटको मुख्य बजार आउन जान तोरी खोला हु्दै करिब १ घण्टा गाडीमा यात्रा गर्नुपर्दछ । अब भने सहज रुपमा मजुबा चरौदी तथा भुजुङ्गे सम्म यात्रा गर्न सकिने वडा अध्यक्ष नर बहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार ६ को सम्पुर्ण स्थानमा सहजरुपमा गाडी गुड्न सक्ने गरि बाटो मर्मत गरिने छ । यस वडामा बाटो मर्मत गर्ने स्थान बढि भएकोले बिनियोजित बजेट १ लाखले नपुग्ने उनको भनाई छ ।
दशैंको मुखमा सर्वसाधारणको यात्रा सहज बनाउनका लागि सडक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको गलकोट नगरपालीकाको भनाई छ ।
नगरपालिकाले प्रत्येक वडालाई १ लाख भन्दा माथि खर्च नहुने गरी सडक मर्मतमा लगाएको हो । बर्षातको समयमा ठाउँ–ठाउँमा बिग्रेका सडकमा दशैं नजिकिन लाग्दा सवारी सधानको चहलफल समेत बढ्न थालेको छ । गलकोटका सबै क्षेत्र सडक सञ्जालले छोएको भएपनि बर्षातको समयमा बाढिपहिरो लगायका समस्याका कारण सवारी सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् ।